साझा पार्टीले स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने. – Sabaikoaawaj.com
साझा पार्टीले स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने.
मङ्लबार, चैत्र ८, २०७३ 9:21:07 PM	मा प्रकाशित
काठमाडौं, ८ चैत/ रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीले आगामी स्थानीय चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवार उठाउने भएको छ । तर, आर्थिक सहयोग भने नगर्ने बताएको छ ।
प्रकाशित मितिः मङ्लबार, चैत्र ८, २०७३ 9:21:07 PM